ထုတ်ဖော်ပြသလာတဲ့ 2022 Mercedes EQS ရဲ့ MBUX Hyperscreen နည်းပညာအသစ် ! – MyMedia Myanmar
ထုတ်ဖော်ပြသလာတဲ့ 2022 Mercedes EQS ရဲ့ MBUX Hyperscreen နည်းပညာအသစ် !
Mercedes အနေနဲ့‌ကတော့ သူတို့ရဲ့ MBUX အမျိုးအစားကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် တုန်းက စတင်မိတ်ဆက် ပေးခဲ့ တာ ဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် A-Class အဆင့်ထိ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကာ ယခု လက်ရှိ ပိုမို ကြီမားပြီး တန်ဖိုးမြင့်တဲ့ Infotainment System တွေ ဖြစ်မလာခင်ကတည်းက အတော်လေးကို အဆင့်မြင့်ခဲ့ တာပါ။ S-Class ( W 223 ) ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲ အဆိုပါ နည်းပညာ စနစ် တွေကို နောက်အဆင့် တစ်ခုအထိ ရောက်ရှိအောင် တိုးမြှင့်လာ နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကာ 12.8 လက်မ အရွယ် ထိရှိတဲ့ OLED Central Display ကိုပါ ထည့်သွင်းလာနိုင်ခဲ့ကာ အခုဆိုရင် ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ နည်းပညာ အဆင့်မြင့်တင်မှုတွေကိုလည်း သူတို့ရဲ့ Flagship လျှပ်စစ် Sedan ကားမှာ ပြုလုပ် လာနိုင်ဦးမှာပါ။ Mercedes ကနေ အသုံးပြုလာခဲ့သမျှ Screen တွေထဲမှာ အကျယ်ပြန့်ဆုံးနဲ့ သဘာဝ နဲ့ အနီးစပ် ဆုံး အနေအထား ဖြစ်လာမယ့် အဆိုပါ Screen ဟာ EQS Model ကနေတစ်ဆင့် စတင်ပြီး ချပြလာ တော့မှာ ဖြစ် ကာ ပိုပြီးထူးခြားလာတာကတော့ မှန်ခုံးနည်းပညာနဲ့ Hyperscreen တစ်ခု ဖြစ်လာ တာပါပဲ။
အခု နည်းပညာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ရှုထောင့် အမျိုးမျိုးကနေ ရိုက်ကူးတင်ပြထားတဲ့ Teaser တွေ အများအပြား ထွက် ပေါ်ခဲ့ဖူးပေမယ့်လည်း အခုလောက် အထိကြီးမားတဲ့ Screen တစ်ခုကို မမျှော်လင့် ခဲ့ရဲတာ‌ကတော့ အမှန်တကယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Screen အစား S-Class ရဲ့ EV မှာ တော့ Screen တွေ အများအပြားကို ဘေးချင်းကပ် တပ်ဆင် ထားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ Dashboard တစ်ခုလုံးကို လုံးဝ တစ်ညီတစ်ညာ တည်းနဲ့ Screen အပြည့် ဖြစ်နေမယ့် ပုံစံ အဖြစ် သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖန်တီးထားမယ်လို့ပဲ ထင်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အဆိုပါ EQS ကတော့ အခုလို မျိုး Screen ‌တွေ အများအပြားကို ထည့်သွင်းထားတဲ့ ပထမဆုံး ကားတစ်စီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူး သဖြင့် Honda E ၊ Porsche Taycan တို့မှာတုန်းကလည်း မြင်ခဲ့ရသလိုအခုထိ မြင်တွေ့ထားရသမျှ Teaser တွေ အားလုံး ကတော့ Screen တွေ အများအပြားနဲ့ ဖန်တီးထားမယ်လို့ပဲ ယုံကြည်ရ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mercedes ဘက်ကလည်း ပိုပြီးကြီးမားကာ ကွေးညွှတ်တဲ့ Screen Unit ကိုလည်း ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အာမခံထားသလို Artificial Intelligence ( AI ) နည်းပညာရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အနေနဲ့လည်း နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကို ခေါ် ဆောင်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ‌လည်းဆိုထားပါသေးတယ်။
ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ အနေအထားတွေအရတော့ MBUX Hyperscreen ကို လာမယ့် ဇန်နဝါရီ လ ၁၁ ရက် နေ့မှာ စတင် ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ Digital စနစ် နဲ့ပဲ ပြသ‌မယ့် Consumer Electronics Show မှာပဲ ထုတ်ဖော်သွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ EQS အမျိုးအစား အနေနဲ့ကတော့ အခုနှစ် နှောင်းပိုင်း လောက်မှာ ထွက်ပေါ်လာဖို့ ရှိနေတဲ့ ဇိမ်ခံ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး Sedan ကားတစ်စီးဖြစ်ပြီးတော့ Optional Equipment တစ်ခုအနေနဲ့ အတော်လေး ထူးခြား ကောင်းမွန်တဲ့ Infotainment စနစ်ကိုလည်း ခံစားနိုင်ဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကားရဲ့ အသေးစိတ် အချက် အလက် တွေကို တော့ အများကြီးမသိရှိရသေးပဲ သေချာပေါက် သိထားရတာ တစ်ခုကတော့ 435 မိုင် ( 700 km ) WLTP Range အထိ ရှိလာနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ EQS အမျိုးအစား ရဲ့ Cabin အပိုင်းမှာ တော့ အဆိုပါ MBUX Hyperscreen ဟာ အဓိက ဆွဲဆောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်လာ နိုင်သလို Mercedes အနေနဲ့ ကလည်း HEPA ရဲ့ Filtration System အတိုင်း ဖန်တီး ထားနိုင်တဲ့ အခန်းတွင်း လေအရည်အသွေး ကိုလည်း ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးထား ဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့အပြင် ဒီဇိုင်းပိုင်း အရတော့ S-Class Sedan ကားတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ပိုပြီးတော့ ပါးလွှာတဲ့ အသွင်မျိုးနဲ့ ထွက်ပေါ် လာနိုင်ပြီး Liftback Configuration နဲ့လည်း လက်တွေ့ကျကျ အသုံးချပြီး ဖန်တီးလာနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် EQS Sedan အမျိုးအစား အနေနဲ့လည်း SUV နဲ့ အတူ လာမယ့် ၂၀၂၂ မှာ ပဲ ဆက်လက် ထွက်ရှိလာနိုင်ပြီး အခုဆိုရင်တော့ စမ်းသပ်နေတဲ့အဆင့်ကို ရောက်ရှိလို့ နေပါပြီ။ ဒါ့အပြင် Mercedes အနေနဲ့ ကလည်း ပိုပြီးတော့ သေးငယ်တဲ့ EQE Sedan နဲ့ SUV တို့ကိုလည်း ဆက်လက် ထုတ် လုပ်သွား ဖို့ရှိနေပြီး အဆိုပါ ကားတွေကတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကြီးမားတဲ့ လျှပ်စစ်ကား ဈေးကွက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ထုတ်ဖော်ပြသလာတဲ့ 2022 Mercedes EQS ရဲ့ MBUX Hyperscreen နည်းပညာအသစ် ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-08T13:05:25+06:30January 8th, 2021|MYCARS MYANMAR|